Ngwa ise kachasị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ na ajụjụ na Android | Androidsis
Ngwa ise kachasị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ na ajụjụ na gam akporo
Aaron Rivas | | Ngwa gam akporo, Mobiles
Ajụjụ na ụdị bụ otu n'ime ngwa bara uru iji nwalee ihe ọmụma na nka onye ọ bụla. Ma ọ bụ maka ọrụ, nwa akwụkwọ ma ọ bụ mpaghara ọ bụla, ha zuru oke ịmara ókè mmadụ maara gbasara otu isiokwu ma ọ bụ karịa yana otu ha nwere ike isi rụọ ọrụ n'otu mpaghara. Ọ bụ ya mere ọ dị mma ịnwe otu, maka nke a ị ga -echepụta ya, mana nke ahụ abụghị ihe siri ike ịme, yana ọbụlagodi obere na ngwa ndị a anyị na -egosi gị ugbu a.
Ọzọ, anyị depụtara ngwa ise kachasị mma iji mepụta ma chepụta ajụjụ na ụdị na gam akporo. Ndị niile ị ga-ahụ ebe a bụ n'efu na, n'otu oge ahụ, n'etiti ndị kacha mma na nke ebudatara na Google Play Store.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ usoro nke ngwa ahụigodo kacha mma ị ga-ajụ ajụjụ na ajụjụ ọnụ na smartphones Android. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ ịkwụ ụgwọ micro, nke ga-enye ohere ịnweta atụmatụ adịchaghị na ịnweta atụmatụ ndị ọzọ, n'etiti ihe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ikwughachi ya. Ugbu a ee, ka anyị nweta ya.
1 Onye na -ewu akwụkwọ - Fọm Zoho
2 ụdị.app | Onye na -ewu akwụkwọ na nyocha
3 Ngwa FormsApp
4 SurveyHeart - Nnyocha na ajụjụ ntanetị
5 Mpempe akwụkwọ Jotform: Mepụta Mpempe
Onye na -ewu akwụkwọ - Fọm Zoho
Iji bido nke ọma, anyị nwere Fordị Zoho, otu n'ime ngwa bara uru iji mepụta mpempe akwụkwọ na ajụjụ ọnụ na gam akporo site na ọkọ, na -enweghị ọtụtụ nsogbu. Ọ dị mfe iji ma dị n'asụsụ Spanish, na -eme ka ọ dị mfe imepụta site na interface ya yana ngwaọrụ niile ọ na -enye maka ya.
O zuru oke maka ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi, ndị ọrụ na ụdị mmadụ niile chọrọ irite uru n'ụdị. Mepụta ma hazie ọkwa email wee kesaa ndị ọzọ ụdị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ihe ọzọ na -adọrọ mmasị ya bụ nke ahụ Na -enye gị ohere ịrụ ọrụ na -enweghị njikọ ịntanetị.
N'aka nke ọzọ, na ụdị Zoho ị nwere ike ịkekọrịta ụdị, ma ọ bụ ndị otu ọrụ ma ọ bụ n'ihu ọha; onye ọ bụla nwere ike ịnweta ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye gị ohere ịkekọrịta ha site na netwọk mmekọrịta n'ụzọ dị mfe. Ihe ọzọ bụ na o nwere ọtụtụ ndebiri maka isiokwu ụdị dị iche iche, dị ka azụmahịa, Ọrụ Ndị Mmadụ, nyocha, ihe owuwu, otu, mmezi, ndebanye ihe omume na ọkpụkpọ oriri, ndebanye aha, email ndenye aha, ịkwụ ụgwọ yana gbakwunyere. Ọ nwekwara ndebiri maka ndebanye ndebanye na ajụjụ.
Ụdị Zoho dakọtara na ngwa ọfịs ndị ọzọ yana ọbụlagodi Google Drive na akwụkwọ mgbasa ozi, iji chekwaa ihe mgbakwunye niile na igwe ojii. Ọ na -akwadokwa Google Suite, yabụ ị nwere ike chekwaa fọm natara, kenye ọrụ dị iche iche, ma jikwaa ma jikwaa ọrụ gị ozugbo na akaụntụ G Suite.
Ụdị Onye Nrụpụta - Ụdị Zoho
ụdị.app | Onye na -ewu akwụkwọ na nyocha
N'ịga n'ihu ikwu maka ngwa nke abụọ iji mepụta ajụjụ ọnụ, nyocha na ụdị na gam akporo, anyị nwere form.app, otu n'ime nhọrọ kachasị mma nke ụdị ya taa.
Site na ngwá ọrụ a, ekele maka ihe niile ọ na-enye, enwere ike ịmepụta ụdị ịntanetị na obere oge yana mmasị gị. Ị nwekwara ike ịmepụta nyocha n'ime nkeji ole na ole, wee kesaa ya site na nyiwe dị iche iche dị ka netwọkụ mmekọrịta na mgbasa ozi ndị ọzọ dị ka WhatsApp na Facebook, iji nweta azịza n'ụdị ọ bụla n'ụdị ma ọ bụ nyocha dabere.
N'aka nke ọzọ, na form.app ị nwekwara ike ịmepụta ụdị ịntanetị na mgbako, nyocha na mgbagha ọnọdụ, na-anakọta nzaghachi ma nyochaa ha ozugbo wee nabata ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na Stripe na PayPal, yana mpaghara emebere iji tinye akaụntụ ebe ị ga-aga. Ọ nwekwara atụmatụ ndị ọzọ dị elu na -enye ohere ịchịkwa onye na-enweta ụdịdị, ma ọ bụrụ naanị gị, ọha ma ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ. Ọ na -abịakwa na ihe mgbako na -enye gị ohere ịnye ụfọdụ akara na ajụjụ na azịza ọ bụla, wee hụ nsonaazụ enwetara na nyocha na ụdị emere.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imepụta ụdị Google na SurveyHeart, FormsApp zuru oke maka ya, ebe ọ bụghị naanị na -enye gị ohere imepụta ha, kamakwa ọ na -enye gị ohere idezi ha na elu elu, njirimara bara uru maka ndị ọrụ ọfịs, ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi.
Site na FormsApp ị nwere ike ịmepụta ụdị dị iche iche ekele ọtụtụ ndebiri o nwere, ma dị ka ndị a: Ntụle, tiketi ọpụpụ, arịrịọ ịtụ, ozi ịkpọtụrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ ịkpọ òkù, arịrịọ nkwụsị oge, arịrịọ ịtụ, ntinye ihe omume, nkwupụta ihe omume, na ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ọ na-enye gị ohere ịnweta ọkwa nke nzaghachi ụdị Google ọhụrụ yana ịkekọrịta ụdị n'ụzọ dị mfe, n'etiti ihe ndị ọzọ.
SurveyHeart - Nnyocha na ajụjụ ntanetị
Emebere ngwa a maka imepụta nyocha nke ị nwere ike ịkekọrịta n'etiti ndị enyi gị, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ndị ọrụ ibe gị, ndị ezinaụlọ ama ama yana onye ọ bụla. Site na ajụjụ ndị ị nwere ike chepụta ma kesaa ngwa ngwa, ị nwere ike ịme nyocha iji chọpụta ihe ndị obodo dị n'ógbè gị chere ma ọ bụ, nke ọma, chọpụta ihe ịchọrọ ịma gbasara ndị ahụ dị nso, n'agbanyeghị nzube ya. Ike nke ajụjụ a ga -eji ngwa a mee dị oke mma nke na ọ dị mfe ịme nyocha ahịa, ma ọ bụrụ na ị ga -eme ya.
Ugbu a, ọ na -abịa na ọtụtụ ndebiri maka nyocha na ụdị dị iche iche, dị ka afọ ojuju ndị ahịa, ntụnye, kọntaktị, ndebanye aha, nzaghachi, afọ ojuju ndị ọrụ, akwụkwọ ikike, ịtụ ngwaahịa, nzaghachi webụsaịtị, na ndị ọzọ.
SurveyHeart - Mepụta akwụkwọ & ule
Mpempe akwụkwọ Jotform: Mepụta Mpempe
Iji mechaa akwụkwọ nchịkọta nke ngwa kachasị mma iji mee ajụjụ na ụdị na gam akporo, anyị nwere Jotform, nhọrọ ọzọ mara mma nke ị nwere ike ibudata ugbu a na Storelọ Ahịa Play, dịka ọ bụ ngwa ọrụ nke, na mgbakwunye na ịme ụdị na nyocha ịntanetị, ị nwere ike ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ metụtara idezi na inyocha ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa ise kachasị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ na ajụjụ na gam akporo
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ige YouTube na Android